I-intrahistory enelukuluku ye-solar sphere ye-Apple Watch | iPhone News
I-intrahistory enelukuluku ye-solar sphere ye-Apple Watch
UMiguel Hernandez | 09/05/2022 18:00 | I-Apple Watch, Imikhiqizo ye-Apple
I-Apple Watch inenqwaba yezimbulunga, futhi njengokungathi lokho akwanele, iningi lazo lingenziwa ngendlela oyifisayo kuze kube sekugcineni. Angikhonzi njengesibonelo noma ireferensi, njengoba bengisebenzisa ubuso obufanayo be-Apple Watch kusukela ngo-2016, kodwa lokho akusho ukuthi ngingamangala ngemva kohlu lwezinketho inkampani ye-Cupertino eyenza itholakale kithi.
Sikutshela nge-intrahistory enelukuluku le-solar sphere ye-Apple Watch, efihla izimfihlo eziningi kunalokho obukucabanga. Zitholele nathi, kwazi bani, mhlawumbe nawe ugcine usuyisebenzisa osukwini lwakho nosuku.
Kusukela yethulwa ngo-2014, i-Apple ikhulise ngokuphawulekayo inombolo yokudayela iwashi layo elihlakaniphile, futhi ngenxa yalokho eligqokekayo elidume kakhulu emlandweni, elikwazi ukulibonisa. Ukusuka emikhakheni yawo yomdabu eyi-10 kuye kwezingaphezu kuka-31 nokwenza ngokwezifiso okuhambisanayo esivumela ukuthi sikulungise, namuhla line kakhulu, kodwa ungakhathazeki, i-Apple Watch ayinamanzi.
Naphezu kweqiniso lokuthi iningi labo ligxile ekunikezeni ulwazi oluningi olungenzeka endaweni encane kunazo zonke, kukhona futhi ukungabaza okuncane okusele kuma-romantics of astronomy kanye nezidalwa zasezulwini, yilokho okukulethe lapha namuhla nokuthi yini ozoyivumela. ngikutshele ukuthi yini engemuva kokudayela kwelanga kwe-Apple Watch.
Ngokufika kwe-watchOS 6 ngo-Ephreli 2020, ukudayela kwelanga kwaqala, kodwa le timu ithatha incazelo ephindwe kabili ngokufika kwentwasahlobo. Cishe uphakathi kwezigidi zabantu abahlushwa i-Seasonal Affective Disorder (SAD). Ukufika kwentwasahlobo kusithinta kabi isimo sethu somqondo ngezimpawu ezifanayo nalezo zokucindezeleka okwaziwayo, futhi elinye lamakhambi angcono kakhulu alesi sifo sesikhashana ukujabulela ukukhanya kwemini ngokugcwele.
1 Imininingwane yokudayela kwelanga
2 Indlela yokuqonda ukusebenza kwe-solar sphere
Imininingwane yokudayela kwelanga
Ubuso belanga be-Apple Watch buqukethe ukudayela okunombhalo oyi-12 kodwa ofundeka njengewashi lamahora angama-24. Kuyo, ingxenye yokudayela izoboniswa ngokukhanya okwesibhakabhaka kanye nenye ingxenye e-navy blue, kulokhu indawo ekhanyisiwe izocacisa ngqo amahora okukhanya kwelanga esiyowajabulela ngalolo suku kuye ngendawo esikuyo, ngakho-ke, indawo emnyama izobhekisela ngokuqondile emahoreni asebusuku. Empeleni, umugqa ohlukanisa imibala yomibili uzobonisa kokubili ukuphuma nokushona kwelanga.
Ngakolunye uhlangothi, ukudayela okubonisa isikhathi kuzolingisa ukuba yiLanga, ngendlela efanayo lapho sizoba nenye i-sphere encane yangaphakathi ezosibonisa iwashi elijwayelekile, esingalenza ngendlela oyifisayo noma silifuna ngefomethi ye-analog, noma uma siyifuna ngefomethi yedijithali. Futhi ekugcineni, wonke amakhona obuso (ngoba i-Apple Watch iyiwashi "eliyisikwele") ayatholakala ukuze wengeze noma yiziphi izinkinga, ukuthi ezinye zazo zizojwayela i-contour ye-sphere ekhethiwe, njengenjwayelo.
Futhi, uma kwenzeka sikhetha i-subdial yedijithali, sizonikezwa isandla sesibili umaka wehora, ukuze sibe nokunemba okukhulu okungenzeka.
Okokugcina, uma sicindezela i-sphere sizonikezwa ulwazi mayelana nomzuzu oqondile ezingeni lelanga losuku esikulo, kanye imininingwane mayelana nengqikithi yamahora okukhanya esizowajabulela.
Indlela yokuqonda ukusebenza kwe-solar sphere
Ngokusobala lonke lolu lwazi nemibala eyahlukene ehlinzekwa yi-solar sphere ye-Apple Watch yakhelwe okungaphezu kokubona nje uma kusemini nasebusuku. Okokuqala, sizoqala ngesisekelo esingalimaza ingqondo yakho: Eqinisweni, ukusa/ukuhwalala kuyinkimbinkimbi kakhulu kunoshintsho phakathi kwemini nobusuku.. Ngempela, isikhathi esiqondile sizoncika ekusetshenzisweni ofuna ukunikeza ukuphuma kwelanga, kanye nendawo lapho ukhona.
Ukuze wenze ukuqonda kwakho kube lula, sizosebenzisa igama elithi "ukuhwalala", elingengaphezu noma ngaphansi kunezinkomba zokukhanya zangaphambi kokuhlwa nokuntwela kokusa. Sekushiwo lokho, ukudayela kwelanga kwe-Apple Watch kusebenzisa ingqikithi yemibala emihlanu ehlukene eluhlaza okwesibhakabhaka ukumela isikhathi sosuku (noma sobusuku) esizithola sikuso, ake sizehlukanise kusukela kokumnyama kakhulu kuye kokukhanya kakhulu:
Isithombe: Solinruiz (Ku-WikiPedia)
Ebusuku: Umbala omnyama wokudayela kalula futhi umane ubonisa ubusuku obuvaliwe.
i-astronomical twilight: Lo mbala wendilinga, owesibili omnyama kakhulu, uzobonisa ukuhwalala kwezinkanyezi, okungukuthi, lapho iLanga liyi-< 18º futhi lokho kusivumela ukuthi sibone izinkanyezi zobukhulu besithupha ngeso lenyama.
I-Nautical Twilight: Kuleli qophelo izovezwa lapho iLanga lingaphansi kuka-12º ngaphansi komkhathizwe. Uma ufika lapha, izinkanyezi zobukhulu bokuqala nowesibili zizobonakala ngeso lenyama.
i-civil twilight: Umbala ongaphambili uzokhombisa ukuthi iLanga lingaphansi kuka-6º ngaphansi komkhathizwe ngakho-ke, zombili izinkanyezi ezinobukhulu bokuqala namaplanethi zingabonakala.
Usuku: Umbala okhanyayo wokudayela uzobonisa amahora okukhanya kwasemini okugcwele.
Nansi indlela I-Apple inqume ukusebenza ngokunemba okungajwayelekile ezinkampanini ezijwayelekile, kepha okujwayelekile enkampanini ye-Cupertino, inkundla, naphezu kwakho konke, izosetshenziswa kuphela njengomthetho ojwayelekile ngabathandi bezinkanyezi. noma emaphutheni ayo labo abafunde lesi sihloko futhi banqume ukuthatheka yilo mkhakha welanga onelukuluku.
Naphezu kwakho konke, iyindilinga enhle iyodwa, ngamathoni aluhlaza okwesibhakabhaka athakazelisa kakhulu, nakuba i-Apple igcizelela umkhuba wayo wokunganikezi izinkinga ngemibala yazo yemvelo kuzo zonke izinhlaka, ngicabanga ukuthi ngenhloso yokugcina umlingo lolu hlobo lwezinhlaka eziqondene nomklamo ngamunye. Noma kungaba njalo, yisikhathi esihle sokuthi ulungiselele indawo yakho yelanga ku-Apple Watch, manje usungakwazi ukumamatheka ngoba usuwazi konke ukungena nokuphuma kwayo, uyayibona ngamehlo afanayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » I-intrahistory enelukuluku ye-solar sphere ye-Apple Watch
Unomthwalo wemfanelo ngedatha: AB Internet Networks 2008 SL
I-Apple yabelana ngokulungiswa kwezaziso zobumfihlo eziyiphutha ne-AirTags
Imibala emisha ye-AirPods Max ngokufika kwe-AirPods Pro 2